EVY's Kitchen: Mix Salad ( A Thote Sone)
Posted by Evy at 10:26 PM
Hi..love this salad. Thanks for your recipe.
:)လုပ်ရတာနဲ့စားရတာမတန်ဘူး လူများမှ ပိုကောင်းတာနော်။
လုပ်စားပါစူးနွယ်ရဲ့ သိပ်မကြာပါဘူး။ ဆီချက်ကတော့နဲနဲညှော်မယ်။ အဲဒီမှာ ဆောင်းကုန်မှလုပ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူတယ်နော်။
အိမ်မှာက ညီမတွေပါရှိတော့ ခဏပဲမမွန်ရေ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် မနက်တစ်ပိုင်းပဲခံတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း မကြာမကြာချက်ဖြစ်တာ :D